यी हुन् गर्मीमा छालालाई स्वस्थ राख्ने खानेकुरा.... - Health Today Nepal
यी हुन् गर्मीमा छालालाई स्वस्थ राख्ने खानेकुरा….
April 8th, 2019 स्वास्थ्य सुझाब0comments
एजेन्सी,चैतः हुन त छालालाई स्वस्थ राख्न गर्मी होस् वा चिसो, छालाको सफाइ अनिवार्य छ । यदि छाला सफाइ गरेपछि अलि कडा हुन्छ भने छाला क्लिनर छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो अवस्थामा तेल आधारित क्लिनर प्रयोग गर्नुपर्छ । किनकि यसले छालामा नरम बनाउँछ। यसका साथै फलफूल र हरियो सागपात सेवन गर्दा पनि छाला स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ । गर्मीमा निम्न लिखित खानेकुरा खाएर छाला स्वस्थ राख्न सकिने धेरैको मत छ ।
गाँजर सेवनबाट पेटको समस्या हटाउँछ। यसका साथै रगतको सफाइ पनि गर्छ । गाँजरमा भरपूर मात्रामा भिटामिन ए पाइन्छ। यसले छालामा निखार ल्याउन मद्दत पु¥याउँछ ।
बदाममा प्रोटिन, भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छ । यसको नियमित सेवनले छाला स्वस्थ राख्न मद्दत पु¥याउँछ । यस्तै, स्मरण शक्ति राम्रो बनाउन पनि यो उपयोगी नै मानिन्छ। चिसो मौसममा बदाम खाने सल्लाह दिने गरिएको पाइन्छ। बदामको दूध स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ। यसको दूधले शरीरमा सुगर लेबललाई कन्ट्रोल राख्छ।
अण्डामा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। अण्डाको सेतो भागमा प्रोटिन तथा एल्ब्युमिन पाइन्छ। त्यसकारण अण्डा सेवन गरे छालामा दाग तथा धब्बा आउन दिँदैन। अण्डाको सेतो भागमा पाइने भिटामिन र मिनरलले छालालाई स्वस्थ राख्न मद्दत पु¥याउँछ ।
फर्सीको बिजमा भिटामिन ए, भिटामिन सी र जिंक पाइन्छ। यसले छाला स्वस्थ राख्न मद्दत गर्ने चिकित्सक बताउँछन् ।
Previous article विभिन्न ब्राण्ड दिएर विक्री गरिएको पिउने पानीमा कोलिफर्मको जीवाणु
Next article चितवन मेडिकल कलेजमा पनि टेस्ट ट्युब बेबी सेवा सुरु
औषधि टुक्राएर खाए स्वास्थ्यको लागि झन् घातक
गर्मीमा स्वस्थ रहन कस्तो खाना खाने ?
खाली पेटमा लसुन खानुका फाइदा नै फाइदा
Jul 15th 3:17 AM
१० महिनादेखि बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल अध्यक्ष विहीन
Jul 15th 3:01 AM
अस्पतालको सेवा पुनः सञ्चालनको माग गर्दै स्थानीयबासिन्दा आन्दोलित
Jul 15th 2:42 AM
परिवार नियोजनका अस्थायी साधन प्रयोगमा पुरुषभन्दा महिला बढी सचेत
Jul 15th 1:45 AM
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुरु,तराईका तीन स्थानमा छुट्टै एकाइ सञ्चालन
Jul 14th 10:58 AM
तीन दर्जन नयाँ स्वदेशी औषधी कम्पनी सञ्चालनको तयारीमा
Jul 13th 3:23 AM
विपद्को समय औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सहयोगको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोक्यो सम्पर्क व्यक्ति
Jul 13th 2:51 AM
अस्पतालबाटै नवजात शिशु गायव…..
Jul 13th 2:25 AM
पाल्पामा झाडापखाला लागेर ५० भन्दाबढी बिरामी, झाडापखालाको प्रकोपले २ गाउँ प्रभावित